Vaovao - Serivisy fanamboarana akanjo anaty iraisam-pirenena ： hamolavola ny habeny mety aminao
Mikasika ny fahazoana izay tadiavinao. Ny mety. Ny lamba mety. Ny antsipiriany mety. Ny fomba mety. Ny mpanolotsaina sary anay manokana, fantatra koa amin'ny maha mpanakanjo anay, dia manampy anao hisafidy lamba maherin'ny 2000. Afaka manampy anao amin'ny zavatra takinao rehetra izahay.
Ho an'ny atin'akanjo vehivavy dia manome endrika, serivisy famokarana izahay, ny haben'ny atin'akanjo, famolavolana hentitra ary famokarana; Fehezo tsara ny kalitaon'ny atin'akanjo, mba hanomezana tolotra fanaingoana atin'akanjo mitandrina. Xinzi or Rain dia mahatakatra ny maha-be atao anao. Na any amin'ny biraonao na any an-tranonao ianao dia miantoka ny zavatra ilainao amin'ny fandaharam-potoanao. Ny fotoana no rendrarma farany - ary izany no omenay anao.
Xinzi Rain Apparel co., LTD., Natsangana tamin'ny taona 2004, dia nahazo ny "Top Ten Brand", "International Sales Top Ten Trusted Brand", sns. Ny rafitry ny mpanorina dia mirindra mialoha mifototra amin'ny drafitry ny orinasa, nanangana fivarotana marika, magazay ary sampana ary masoivoho an-jatony, izay manakaiky ny faritany sy tanàna 30 eo an-toerana. Mandray anjara mavitrika amin'ny satroka bra & fohy, akanjo anatiny, akanjo fanatanjahan-tena ary pataloha panty plus size.
Ny orinasanay dia manarona faritra 8000 metatra toradroa, mihoatra ny 20 ny tsipika famokarana, ary manangana sampana any Guangdong, mametraka ny fampandrosoana, ny famolavolana, ny famokarana, ny varotra ho iray amin'ireo orinasa vondrona. Fampiasana mazava tsara ny landihazo, landy ary satin ary fitaovana hafa ankafizin'ny hoditra amin'ny fantsom-pamantarana marika, avelao ny hafanan'ny famoronana, ny fo amin'ny fanjaitra sy ny kofehy mba hifankalala.
Ny bras sy ny akanjo anatiny dia mpanolo-tsaina sy akanjo, mahay tsara amin'ny lamba, fomba ary lamina. Izahay dia mikasa, mandrindra ary mitazona ho an'ny mpanjifanao, ka hitafy akanjo tsara izy ireo amin'ny toe-javatra rehetra.
Mba hijerena ny serivisy manokana: OEM / ODM, serivisy famolavolana, fanaovana santionany, MOQ, famokarana betsaka, fotoana fandefasana, ora fandefasana, fiantohana amin'ny fandoavanao, ny orinasanay, ny olona anay, ny vokatra sns, pls aza misalasala mandefa anay E -mba mailaka, avelao ny msg anao, ampio numero whatsapp, na miantso anay, dia tongasoa anao!